EstBest Bitcoin Brokers ngoJanuwari 2022 - [Isikhokelo saBaqalayo kwiPROFIT]
Abadayisi beBitcoin abaBalaseleyo-Funda isiKhokelo esi-2 soRhwebo esiGcweleyo se-2021!
I-Bitcoin Brokers, ijonge ukujoyina uguquko lwe-imali yedatha ngokuthenga ezinye zeBitcoin ezizezakho? Ukuba kunjalo, eyona ndlela ilula kunye neyona isebenzayo yokwenza oku kungumthengisi weBitcoin.
Ngamafutshane, abathengisi ababalaseleyo beBitcoin bayakuvumela ukuba uvule ngokukhawuleza iakhawunti, ubeke imali ngedebit okanye kwikhadi letyala - kwaye emva koko uthenge i-Bitcoin eninzi okanye encinci njengoko uthanda.
Ngale nto ithethwayo, kukho amakhulu amaqonga asebenzayo kwintengiso, ke ukwazi ukuba yeyiphi i-broker oza kuyibhalisa akukho nto elula. Kananjalo, singacebisa ukuba sifunde isikhokelo sethu kwiiBitcoin eziBarhwebi eziGqwesileyo.
Asipheleli nje ekutyhilweni kokhetho lwethu oluphezulu lwe-5 Bitcoin broker ye-2021, kodwa sikwacacisa ukuba kutheni ukukhetha i-Bitcoin CFDs yeyona ndlela ikhuselekileyo, enexabiso eliphantsi, kunye neyona ilula yokwenza utyalomali.
Qaphela: Eyona metric ibalulekileyo ukujonga xa ufuna umthengisi weBitcoin ngummiselo. Ekugqibeleni, ukuba umrhwebi akana phepha-mvume, kuya kufuneka uyiphephe.
Yintoni i-Bitcoin Brokers?
Umthengisi weBitcoin ulula nje yorhwebo ntengiso iqonga elikuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise i-cryptocurrensets. Njengomthengisi wesitokhwe kwi-Intanethi, inkqubo ifuna ukuba uvule iakhawunti, ubeke imali, emva koko uthathe isigqibo sokuba ingakanani iBitcoin onqwenela ukuyithenga. Abarhwebi bavumela ukuba usebenzise iindlela zokuhlawula zemihla ngemihla njengedebhithi / ikhadi lekhredithi, iakhawunti yebhanki, okanye i-wallet, eyenza inkqubo yokuthenga ibe lula kakhulu.
Ukubuyisa, Abarhwebi beBitcoin baya kukuhlawulisa umrhumo. Oku kunokuza kuluhlu lweemilo kunye nobukhulu, ke iindleko zakho ziya kuxhomekeka kumrhwebi oyisebenzisayo. Umzekelo, ngelixa abarhwebi abadumileyo beBitcoin bethanda ukuhlawula umrhumo weCoinbase wokufaka imali kwaye yenza amaqonga okuthenga anjengeCrypto Rocket kunye ne-eToro awenzi. Kananjalo, kuya kufuneka uqonde ubume bemirhumo yomthengisi ngaphambi kokuba ungene.
Ngale nto ithethwayo- zimbini iindidi zeBitcoin brokers ezisebenza kwindawo ekwi-intanethi- ke leyo oyikhethileyo iya kuxhomekeka kwiinjongo zakho zexesha elide zotyalo-mali. Ngokusesikweni, oku kunokuba ngumrhwebi ofuna ukuba ugcine i-Bitcoin yakho kwisipaji sangasese, okanye umrhwebi oququzelela utyalomali lwakho ngeCFD elawulwayo.
Iindidi zeBitcoin Brokers
Kubaluleke kakhulu kuwe ukuba uqonde ukuba indlela okhetha ngayo umrhwebi inokuba nelizwi elikhulu xa usenza ukuthengwa kweBitcoin, yiyo loo nto sichaza oku ngakumbi kumacandelo angezantsi.
✔️ Ukuthenga 'Okwenziweyo' kweBitcoin
I-Bitcoin yimali eyabelweyo-oko kuthetha ukuba ayilawulwa nguye nawuphi na umntu okanye igunya. Kananjalo, abo babambe iBitcoin kwisipaji sangasese bane-100% inoxanduva lokuyigcina ikhuselekile. Ngamanye amagama, ukuba i-wallet yakho ye-Bitcoin yayiqhekeziwe- okanye udlulisele imali kwidilesi engavumelekanga, i-Bitcoin yakho iya kulahleka ngonaphakade.
Ngokungafaniyo notyalo mali ngokwesiko, ngekhe ukwazi ukuthatha umnxeba kwaye ubuze umrhwebi ukuba aphande ngelahleko. Ngokuchasene noko, lo ngumngcipheko wokuthenga eyona 'Bitcoin', njengoko kufuneka uqinisekise ukuba uyigcina ikhuselekile ngalo lonke ixesha.
Ngoku, oku akuthethi ukuba ngumnikezeli nge-say ukuba uyazi ukuba zisebenza kanjani ii-wallet ze-cryptocurrency. Nangona kunjalo, ukuba ungumntu omtsha oza kungena kwindawo yeBitcoin okwesihlandlo sokuqala, iingcinga zokuba kufuneka ugcine ezakho iingqekembe akukho nto iphosakeleyo - ingakumbi ukuba izixa ezikhulu zemali ziyabandakanyeka.
Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukuba neyakho 'eyiyo' iBitcoin, umrhwebi ekuthethwa ngaye uya kuqhuba iodolo yakho ngendlela yentlawulo yemihla ngemihla. Nje ukuba kuthengwe iingqekembe, kuyakufuneka uzirhoxise kwisipaji sangasese. Amanye amaqonga akuvumela ukuba ugcine iingqekembe ngaphakathi 'kwesipaji sewebhu' somthengisi- nangona kunjalo, oku kuyingozi enkulu.
Ukuthenga iBitcoin CFDs
Ke oko kusishiya sinokhetho 2 -ukuthenga i-Bitcoin CFDs. Kwabo abangaziyo, i-CFD (ikhontrakthi-yoMmahluko) sisixhobo semali esivumela ukuba utyalomali kwi-asethi ngaphandle kokuba uthathe ubunini. Endaweni yoko, ucinga nje ukuba ixabiso le-asethi liza kunyuka okanye lihle.
Ayisiyiyo kuphela into ebandakanya iiasethi ezinjengeBitcoin, kodwa ngokoqobo nasiphi na isixhobo semali esithengiswa kwiimarike zesiko. Cinga ngemigca yegolide, ioyile, izitokhwe, ii-indices, igesi, ingqolowa kunye nee-ETFs. Kwelinye icala, ukuthenga i-Bitcoin CFD kuya kuthetha ukuba awunayo iarhente engaphantsi.
Nangona kunjalo, ngaba ibalulekile loo nto? Ngokusisiseko, ukuba ujonge ukuthenga iBitcoin kuba ucinga ukuba ixabiso liza kunyuka kwixa elizayo, emva koko iiCFD zinokukunceda oku. Umzekelo, ukuba uthenga iBitcoin CFD xa inexabiso elimalunga ne- $ 6,000- kwaye uyithengise kwiminyaka emibini kamva ngexabiso le- $ 10,000- usenza kwawona loo mvuzo ubuya kuwenza ngokuba ube 'eyiyo' iBitcoin '.
Ngapha koko, izibonelelo zokusebenzisa i-Bitcoin brokers egxile kwii-CFD ziphindwe kane - njengoko sichaza apha ngezantsi.
1. Imirhumo iphantsi kakhulu
Omnye wabathengisi abadumileyo beBitcoin kwindawo ye-Intanethi yile Coinbase. Isizathu esiphambili soku kukuba iqonga lenza ukuba kube lula kakhulu ukuthenga iBitcoin ngedebhithi yemihla ngemihla okanye ikhadi lekhredithi. Nangona kunjalo, iCoinbase ihlawulisa ngokufanelekileyo iinkonzo zayo.
Umzekelo, kuya kufuneka uhlawule i-3.99% ukuze ufake idipozithi / ikhadi lebhanki letyala, emva koko ufumane enye i-1.5% ngalo lonke ixesha uthenga okanye uthengisa iBitcoin. Ezi ntlawulo zezi enkulu xa kuthelekiswa nabarhwebi beBitcoin abagxile kwiiCFD.
Ngapha koko, uninzi lwabathengi beBitcoin esincomela ukuba kweli phepha alukuvumeli ukuba ufake imali simahla - kodwa ungathengisa iBitcoin ngaphandle kokuhlawula naziphi na iikhomishini.
2. Ii-CFD Brokers zilawulwa kakhulu
Uninzi lobubanzi Umthengisi weemali zedijithali Isithuba sisebenza ngendlela engalawulwa. Oku kubangelwa kukuba maninzi kakhulu amazwe ekusafuneka afake umthetho othile we-crypto-okuthetha ukuba amaqonga ayakwazi ukurhweba ngaphandle kokubamba ilayisensi.
Ngokuchasene noko, indawo yomthengisi ye-CFD ilawulwa kakhulu-oko kuthetha ukuba iimali zakho zihlala zikhuselekile ngalo lonke ixesha. Umzekelo, bonke abathengisi beBitcoin abakudidi oluphezulu abadweliswe kweli phepha babambe ilayisensi yolawulo lwenqanaba elinye. Oku kubandakanya imizimba efana ne-UK's FCA, i-ASIC yase-Australia, okanye iCySEC yaseCyprus.
3. UkuGcina nokuThengisa akunamthungo
Njengoko besiphawulile ngokufutshane ngaphambili, ukuthenga 'okwenyani' iBitocin luphupha olubi. Umzekelo, uyacelwa ukuba urhoxise iingqekembe kwi-broker oyikhethileyo, kwaye emva koko uzigcine zikhuselekile kwisipaji sabucala. Xa kuziwa kukothula utyalo-mali lwakho lweBitcoin, kuya kufuneka uphinde ubuyisele imali kwi-intanethi, kwaye uyitshintshise ngemali. Le yinkqubo enzima kakhulu egcwele umngcipheko.
Ngale nto ithethwayo, ngokusebenzisa i-Bitcoin broker egxile kwii-CFDs, awudingi ukuba nexhala lokugcinwa kwaphela. Kungenxa yokuba ii-CFD zilandelela nje i-asethi engaphantsi-oko kuthetha ukuba isixhobo semali asikho. Kananjalo, akukho loyiko lokuba iBitcoin yakho ilahleke okanye ibiwe!
Ngapha koko, oku kuyenza ibe yimpepho xa kufikwa kumba wokufumana imali kutyalo-mali lwakho. Njengoko i-Bitcoin yakho igcinwe kumrhwebi ngesixhobo seCFD, kufuneka ubeke i-odolo yokuthengisa ukuphuma kurhwebo lwakho. Ngokukhawuleza xa usenza, ungayisusa imali uyibuyisele kwityala lakho / kwikhadi letyala, kwiakhawunti yebhanki, okanye kwi-e-wallet.
4. Amandla okusebenzisa iXabiso kunye nokuThengisa okufutshane
Ngokungafaniyo nomthengisi weBitcoin oqhelekileyo, abo banikezela ngee-cryptocurrensets ngohlobo lweCFDs bayakuvumela ukuba usebenzise amandla. Kwabo abangaziyo, oku kuthetha ukuba uya kuba nokukhetha ukuthengisa ngaphezu kwe-akhawunti yakho.
E-UK, umzekelo, abatyali-mali bayakwazi ukusebenzisa amandla ukuya kuthi ga kwi-2x xa bethengisa i-Bitcoin, okuthetha ukuba utyalo-mali lwe- $ 500 luya kukuvumela ukuba uthenge ixabiso le- $ 1,000. Kweminye imimandla, unokurhweba kakuhle ukuya kuthi ga kwi-100x-ethetha ukuba ibhalansi ye- $ 500 inokuvumela ukuba urhwebe nge- £ 50,000!
Ngokufanayo, i-CFD brokers ibamba i-cryptocurrensets ikwavumela ukuba uthengise iBitcoin ngokufutshane. Oku kuthetha ukuba unokwenza inzuzo kwimeko apho iBitcoin iyehla ngexabiso.
Iintlawulo kwiiBitcoin Brokers
Ke ngoku uyazi iintlobo ezimbini zeBitcoin brokers ngoku esebenzayo kwimarike, ngoku siza kuthetha ngentlawulo. Emva kwayo yonke loo nto, uya kuba uthenga i-Bitcoin ngemali-yokwenyani yehlabathi-ke kuya kufuneka ucinge ngendlela oceba ukufumana ngayo imali ngaphakathi nangaphandle kwe-broker.
Uninzi lwabathengi beBitcoin likuvumela ukuba ubeke kwaye urhoxise imali ngeendlela ngeendlela zokuhlawula. Oku kunokubandakanya:
Kungcono ukujonga ukuba ngaba indlela oyikhethileyo yokuhlawula ixhaswa ngaphambi kokuvula iakhawunti kunye nomthengisi.
Imirhumo yedipozithi / yokurhoxisa
Ngamanye amaxesha, abathengisi beBitcoin baya kukuhlawulisa umrhumo wokufaka kunye / okanye ukurhoxisa imali. Njengoko besitshilo ngaphambili, ukuthandwa kweCoinbase kubiza i-3.99% kwi-debit / kwikhadi ledipozithi.
Oku kuthetha ukuba idiphozithi eyi- $ 1,000 iyakubiza i- $ 39.99 kwimirhumo. Kwelinye icala lesiphelo, izinto ezithandwa yi-eToro azihlawulisi kwanto kwiidipozithi, kunye ne- $ 5 kuphela xa kurhoxiswa.
Iimali zeBitcoin Broker
Abarhwebi beBitcoin bakwishishini lokwenza imali, ke kuya kufuneka ubenolwazi oluqinisekileyo ngobume bemali yeqonga. Oku kunokubandakanya:
Le yikhomishini ehlawuliswa ngumthengisi ngalo lonke ixesha ubeka urhwebo. Oku kubandakanya umrhumo xa uthenga iBitcoin, naxa uyithengisa. Ukuba ikhomishini yorhwebo ihlawulisiwe, uya kuhlawula ipesenti yesixa onqwenela ukusithenga.
Umzekelo, masithi umrhwebi uhlawulisa umrhumo we-1.5%, kwaye unqwenela ukuthenga i-Bitcoin eyi- $ 2,000 yexabiso. Oku kuya kuguqulela kumrhumo wokuqala we- $ 30. Nangona kunjalo, xa kuziwa ekuthengiseni i-Bitcoin yakho kuya kufuneka uhlawule ikhomishini.
Umzekelo, masithi ukuba utyalo-mali lwakho lwe- Bitcoin lwe- £ 2,000 ngoku luxabisa i- $ 3,000. Oku kuthetha ukuba uya kuhlawula i-1.5% kwixabiso langoku lemarike ye- $ 3,000- elingana ne- £ 45. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, uninzi lwabarhwebi beBitcoin esincomela ukuba kweli phepha kungabizi ziikhomishini zorhwebo.
Bonke abathengisi beBitcoin baya kuhlawula sasaza. Ngokufana nendawo yotyalo-mali yemveli, lo ngumahluko phakathi kwexabiso 'lokuthenga' kunye 'nokuthengisa' kwempahla.
Umzekelo, masithi iBitcoin inexabiso 'lokuthenga' lama- $ 6,000, kunye nexabiso 'lokuthengisa' lama- $ 6,060. Ngokubala umahluko phakathi kwamaxabiso amabini, sifumana ukusasazeka kwe-1%. Oku kuthetha ukuba ufuna utyalomali lwakho lweBitcoin ukuze unyuse okungenani iipesenti ezi-1 ukuze nje uphule.
Rhoqo kubakho urhwebo phakathi kokusasazeka kunye neekhomishini ezihlawuliswe ngabarhwebi beBitcoin, ke kuya kufuneka ujonge oku ngaphambi kokubhalisa. Umzekelo, ngelixa umrhwebi engenakho ukubiza nayiphi na ikhomishini, unokufumanisa ukuba ukusasazeka kwayo kungangqinelani.
Benza njani iBroker Broker?
Ngaba usadidekile ukuba inkqubo yotyalo-mali isebenza njani kumthengisi weBitcoin? Ukuba kunjalo, uya kufumana isikhokelo ngamanyathelo alula achazwe apha ngezantsi. Oku kutyhila inkqubo yokuphela kokuphela kokuvula iakhawunti, ukufaka imali, ukuthenga iBitcoin, kwaye ngokubaluleke kakhulu - ukwenza imali kutyalo-mali lwakho.
Inyathelo 1: Fumana umthengisi weBitcoin
Ukufumana ibhola eqengqelekayo, kuya kufuneka ufumane umthengisi weBitcoin ohlangabezana neemfuno zakho. Ukuba uyasithanda isandi sokutyala imali kwiBitcoin ngeCFDs, uyakufumana ezona phezulu ezintlanu zidweliswe ezantsi kweli phepha.
Ukuba ufuna ukwenza uphando lwakho, skrolela ezantsi kwicandelo lethu indlela yokukhetha umthengisi weBitcoin?
Ukuze uthenge iBitcoin ngomthengisi olawulwayo, kuya kufuneka uvule iakhawunti. Sukuba nexhala- inkqubo ayifane ithathe ngaphezulu kwemizuzu emi-5 ukuya kweli-10, kwaye nje ukuba usete ukhululekile ukuba uthenge kwaye uthengise iBitcoin ngendlela othanda ngayo.
Ukwenza ukuba inkqubo iqhubeke, kuyakufuneka ubonelele ngolu lwazi lulandelayo:
Kuya kufuneka ukhethe igama lomsebenzisi kunye negama eligqithisiweyo. Ngapha koko-kwaye mhlawumbi okona kubalulekileyo, ii-broker ezilawulwayo ziyafuneka ukuba zingqinisise isazisi sakho ngaphambi kokuba ufake imali.
Kwakhona, inkqubo ithatha imizuzu. Konke okufuneka ukwenze kukufaka ikopi ecacileyo yepaspoti yakho okanye iphepha-mvume lokuqhuba, kwaye iqonga kufuneka libe nakho ukuqinisekisa uxwebhu kwangoko.
Ngoku kuya kufuneka wongeze ezinye imali kwiakhawunti yakho esandula ukwenziwa yeBroker. Njengoko besitshilo ngaphambili, oku kunokwenzeka ukuba kubandakanya ukhetho lwe-debit / ikhadi lekhredithi, iakhawunti yebhanki, okanye i-e-wallet.
Phambi kokuba uqhubeke, jonga ukuze ubone ukuba yeyiphi imali encinci yedipozithi yomthengisi. Kuya kufuneka ujonge nokuba umrhwebi akazukuhlawulisa umrhumo kwindlela oyikhethileyo.
Inyathelo 4: Thenga iBitcoin
Nje ukuba iakhawunti yakho ixhaswe ngemali, ukulungele ukuthenga iBitcoin. Oku kuyakufuna ukuba usete i-oda yokuthenga, ke qiniseka ukulandela amanyathelo achazwe apha ngezantsi.
Khetha i-oda 'yokuthenga'
Ngenisa inani leBitcoin onqwenela ukuyithenga ngemali yendawo yakho
Khetha i-odolo yentengiso ukuze uthathe ixabiso elilandelayo elilandelayo
Misela i-odolo yokulahleka kokuyeka ukuba unqwenela ukuvala urhwebo lwakho ngexabiso elithile ukuba iimarike zihamba ngokuchasene nawe
Nje ukuba uqinisekise iodolo yokuthenga, ukuthenga kwakho kuya kufuneka kwenziwe kwimizuzwana embalwa.
Inyathelo 5: UkuTyala imali yakho kutyalo mali
Ukuba uthenge i-Bitcoin nge-CFD broker, akukho mfuneko yokuba wenze enye into. Ewe, ude ugqibe ukuthengisa iBitcoin yakho - ngethemba ngexabiso eliphezulu kunokuba uhlawule.
Ukuba uyakwenza oko, kufuneka ungene kwiakhawunti yakho yomthengisi yeBitcoin, emva koko ubeke iodolo yokuthengisa. Imizuzwana embalwa kamva, awusayi kubamba i-Bitcoin, kwaye ingeniso iya kongezwa kwimali eseleyo yakho.
Ungayikhupha kwakhona imali uyibuyise kwindlela yakho yokuhlawula oyisebenzisileyo ukuyifaka!
Ukufumana eyona Bitcoin Brokers
Akukho nto inje ngokuba 'ngoyena mthengisi weBitcoin ubalaseleyo' ngentetho nganye, kuba akukho maqonga mabini afanayo. Umzekelo, ngelixa umrhwebi omnye enokunika ukusasazeka okuqinileyo kunye neekhomishini eziphantsi, isenokungayixhasi indlela oyikhethileyo yokuhlawula. Kwangokunjalo, umrhwebi unokubamba iimfumba zamaphepha-mvume olawulo, kodwa ayizukulunga ukuba idiphozithi kunye nemirhumo yokurhoxa iphezulu esibhakabhakeni.
Kananjalo, singacebisa ukuba ufunde ngezikhokelo zingezantsi ekuzingeleni kwakho Abona bathenga zibalaseleyo beBitcoin ze2021.
Inqaku elithile alinakuthethathethana. Ngokubalulekileyo, kufuneka uqinisekise ukuba umthengisi okhethiweyo weBitcoin ulawulwa. Ukuba akunjalo, kunqande. Sikhetha abathengisi beBitcoin abalawulwa yimizimba enjenge-FCA, ASIC, okanye iCySEC. Oku kuyakuqinisekisa ukuba uyakwazi ukuthenga nokuthengisa i-Bitcoin yindawo ekhuselekileyo nekhuselekileyo.
Jonga ukuze ubone ukuba zeziphi iindlela zokuhlawula umthengisi weBitcoin oxhasa. Sikhetha abarhwebi ababonelela ngeedipozithi ngaphandle kwentlawulo ngedebit / amakhadi etyala kunye ne-e-wallets, hayi ubuncinci kuba iakhawunti yakho iya kufakwa kwangoko. Ngenye indlela, uninzi lwabathengi beBitcoin likuvumela ukuba ubeke imali kwiakhawunti yebhanki. Kuya kufuneka, nangona kunjalo, ulinde iintsuku ezimbalwa ukuze imali icace.
Uya kudinga ukuhlawula umrhumo wolunye uhlobo xa usebenzisa i-Bitcoin broker, ke qiniseka ukuba uyazi ukuba le mali ingakanani ngaphambi kokuba ubhalise. Kwilizwe elifanelekileyo, kuya kufuneka usebenzise umthengisi ekuvumela ukuba uthengise i-Bitcoin ngaphandle kwekhomishini, ecaleni kokusasazeka okuqinileyo.
✔️ CFDs okanye 'Eyona Bitcoin'
Kubalulekile ukuba uqonde isiseko sotyalo-mali lwakho lweBitcoin. Umzekelo, ukuba ufuna ukuthenga 'eyiyo' iBitcoin, kuninzi lwamatyala kuyakufuneka urhoxise iingqekembe kwisipaji sangasese. Ukuba ukhetha iiCFDs, awuyi kuba ngumnini weasethi ephantsi. Kodwa, uya kuba nakho ukusebenzisa amandla kunye nokuthengisa okufutshane kwi-Bitcoin, kwaye umthengisi we-CFD uya kudinga ukulawulwa kakhulu.
Ukuba usaqala kwihlabathi lee-cryptocurrensets, kunokuba kulunge ukusebenzisa i-Bitcoin broker enikezela ngobutyebi bezixhobo zemfundo. Oku kunokubandakanya iividiyo ezisebenzisekayo, izikhokelo zenyathelo ngenyathelo, kunye nee-webinars.
Kwelinye icala lesiphelo, ukuba ungumtyali mali onamava, bambelela kubarhwebi beBitcoin ababonelela ngezixhobo zetshathi eziphambili, izikhombisi zobuchwephesha, kunye neendaba ezisisiseko sexesha lokwenyani.
Ungalibali ukuphonononga ukuba zeziphi iindlela ezinikezelwa ngabathengi- ezinje ngengxoxo ebukhoma, i-imeyile kunye nenkxaso yefowuni. Ngapha koko, jonga ukuze ubone ukuba iiyure zokuvula zeqela lokuxhasa liphi ixesha lendawo yakho.
Eyona Broker yeBitcoin yowama-2021-Ukhetho lwethu oluPhezulu
Ukulungele ukuthenga i-Bitcoin ngoku, kodwa awunalo ixesha lokuphanda umthengisi kwisiseko se-DIY? Ukuba kunjalo, ngezantsi uya kufumana umthengisi wethu ophezulu weBitcoin ngo-2021.
Ngaphambi kokuba ufunde nganye kwezona zikhetho zintlanu, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba onke amaqonga ethu acetyiswayo ahlangabezana nezi ndlela zilandelayo:
Xhasa iindlela zokuhlawula zemihla ngemihla
Ukuqukumbela, indawo yokurhweba kwi-Intanethi ngoku igcwele ijam kunye nabarhwebi beBitcoin. Kananjalo, ayidingi kuphela ukuba uchithe ixesha lokuvavanya ukuba uyayithenga 'eyiyo' iBitcoin okanye iiCFD, kodwa kuya kufuneka ujonge uluhlu lwezinye izinto- ezinje ngommiselo, iifizi, iikhomishini kunye neentlawulo.
Ukuba awunalo ixesha lokwenza uphando-kwaye endaweni yoko ufuna ukuthenga iBitcoin ngoku, sidwelise abathengisi bethu abahlanu abalinganisiweyo bango-2021. kunye nendlela engenamthungo-ke inkqubo yotyalo-mali ukuya esiphelweni kufuneka ingathathi ngaphezulu kwemizuzu eli-10!
Ndiyithenga njani i-Bitcoin kwi-intanethi?
Ngokusayina kunye nomnye wabarhwebi bethu ekucetyiswa ukuba ungathenga, unokuthenga iBitcoin ngedebit okanye kwikhadi letyala. Olunye ukhetho lubandakanya ucingo lwebhanki okanye i-e-wallet.
Lithini elona xabiso lisezantsi leBitcoin endinokulithenga kumthengisi we-Intanethi?
Oku kuxhomekeke kumthengisi weBitcoin osayine naye. Ayisiyomfuneko kuphela yokuba ujonge isixa esincinci sedipozithi, kodwa kunye nobuncinci besayizi yorhwebo. Kwiimeko ezininzi, ungaqala ngotyalomali lwe- $ 50.
Kutheni le nto kufuneka ndifake i-ID xa ndisebenzisa umthengisi weBitcoin?
Njengoko sincomela kuphela abathengisi beBitcoin abalawulwa yimizimba enelayisensi yomntu omnye, kuyakufuneka ulayishe ikopi yesazisi sakho. Oku kukuqinisekisa ukuba umrhwebi uhlala ethobela imithetho yasekhaya kunye neyengingqi yokulwa imali.
Zeziphi iifizi zedipozithi ekufuneka ndizibhatalile xa ndisebenzisa idebhithi / ikhadi lamatyala ukuthenga iBitcoin?
Kwakhona, oku kuyahluka ngokuxhomekeke kumthengisi. Umzekelo, ngelixa i-eToro ikuvumela ukuba ubeke imali ngedebhithi / kwikhadi letyala, simahla i-Coinbase ibiza i-3.99%.
Ndiluthengisa njani utyalo-mali lwam lweBitcoin?
Ukuba usebenzisa i-CFD broker elawulwayo ukuthenga iBitcoin, kufuneka ubeke i-odolo yokuthengisa. Xa usenza oko, imali iya kongezwa kwi-akhawunti yakho eseleyo yokurhoxisa
Ngaba kufuneka ndigcine utyalomali lweBitcoin kwisipaji?
Hayi ukuba usebenzisa i-CFD broker, njenge-asethi esezantsi ekhoyo.
Ewe ungamfutshane ngeBitcoin ngokusebenzisa i-CFD broker elawulwayo. Ngokwenza njalo, unokufaka isicelo somgangatho.